Silsiladaha 20 sanaleeyda ah ee Soomaaliya sidkoodii Istanbul maku dhamaysan doonaan.?? (Qalinkii Maxamed Xaaji) | HobyoNet.Com
Monday, May 28th, 2012 | Posted by Hnet
Silsiladaha 20 sanaleeyda ah ee Soomaaliya sidkoodii Istanbul maku dhamaysan doonaan.?? (Qalinkii Maxamed Xaaji)
Nin baa la yiri beri reer ka waashay markaasaa la yiri ‘’Tahliil halloo tufo’’ markaasaa mid kale oo qaraabada ka tirsani soo booday isagoo leh ‘’Halloo tufo ma xumee ma cabayaa horta?’’.
Maanta laba toban sanaale ayay dhaaftay markii jilbaha dhulka loogu dhuftay nidaamkii dhexe ee dalka Soomaaliya oo wixii intaa ka dambeeyey ku can baxay magaca ‘DAL FASHILMAY’.
Bishii August 2007-dii ntii ay socotey khudbad uu Prof. Lee Cassanelli ka jeedinayay daraasad lagu eegayay arimaha Soomaaliya oo lagu qabtay Columbus, Ohio ayuu sheegay inay Soomaaliya leedahay meerto 20 sanaleey ah.
Profesoorka ayaa soo daliishaday halgankii hubeysnaa ee 1920-kii sida kii Sayidka iyo kuwii koofurta ka bilaabmay, Aasaaskii ururka SYL ee 1943-kii oo ay ka dhalatay dowladii ugu horeeysey ee Soomaaliya 1960-kii kuwaasoo uu xukunka ka tuuray Siyaad Barre oo isna 21 sanadood xilka hayay ilaa ay kusoo dulaan oo xukunka ka dejiyaan jabhadihii dalka uga daray sanaddii 1990-kii oo iyaguna 21 sano qaatay.
Ma ogi buu leeyahay caalimkani in isbedelkan labaatanlaha ihi uu xiriir la leedahay xidigiska siyaasadeed ee dalka Soomaaliya iyo inay isbedel wanaagsan iyo dib u heshiisiin waarta uu haatan u sido dadka Soomaaliyeed laakiin waxaan ogahay in rajooyinka ku hareereysan shirka Istanbul uu yahay mid aad u sareeya waayo Soomaaliya ma laha duud ay kusii qaado xitaa sanad kale oo DUULKAAGU HAKU GUBO AH (Self Destruction).
Shirka Istanbul oo ay xaadir ku yihiin ku dhowaad 300 oo ergay oo ka kala socda dhamaan qaybaha bulshada guud ahaan gaar ahaan odayaasha dhaqanka ayaa lagu gorfeynayaa sidii looga gar naqsan lahaa hanaan lagu geeda bixinayo dhibaatada raagtey ee sidii aboorkii u cuntay NUXURKII SOOMAALINIMADA iyo dumuuxaadkii dadkeenna.
Shirka Istanbul ayaa sidoo kale ah mid ay gacanta ku hayso dowladda Turkiga oo ah dalka kaliya ee aynu maanta saaxiib dhab ah iyo walaal dhalad ahba aan ku tilmaami karno taasoo meesha ka saaraysa danihii iska soo horjeeday ee qaabka suuqa madoow loogu dhex iibin jirey shirararka Soomaalida loo qabto.
Itoobiya ayaa shalaytoole fariin soo dirtay balse waxaan rajeynayaa inaan la dhegeysan doonin iyada iyo inta u shaqeeysa ee loo adeegsado burburka dalkooda.
Tani dabcan waa fursad dahabi ah oo mar soo bax ah oo ay gabdhaha iyo wiilasha Soomaaliyeed ku quud dareeyn karaan inaan mustaqbalkii Soomaaliya dhantaalmin, in walaalnimadii aysan dhaawacmin, inaan aragtidii midnimada iyo wadajirku aysan dhimanin iyo in awoodii ay Soomaalidu u lahayd inay dhisto istaraatijiyad dan guud dhowr ihi aysan cuuryaamin.
YAAN LA ILOOBIN ABAALKII TURKIGA OON LA IJAAFAYNIN SOOMAALIDA..!!
Shalay ayaa waxay sheegeen qaar ka mid ah lixdii saxeexay qoondadii la qoonsaday ee DHABAHA DHIGAN (Road map) hadallo ay Turkiga ku eedeynayaan inuu wato dano aysan ogayn sidaa darteedna aysan shirka tegi doonin waxaase wax laga xishoodo ah in adigoo hoos fadhiya dal cadow soo jireena u ah Soomaalida aad shaki ka muujiso dal saaxiib soo jireena u ah Soomaalida ilaa QARNIYADII DHEXE tan kale shirkan oo ilaa febraayo la ogaa siduu deg deg ku noqday? waa su’aal kale.
Cid kasta oo kale aan eedeyno oo aan is xagxagano anagu ileen ceebteen maahoo waa caadadeennee lkn in Turkey la eedeeyo ama la ijaafeeyaa waxay shaki gelineysaa dadnimadeenna oo waxaa naloo arkayaa dad waalan oo waxa u roon iyo waxa u daranba aan kala garan iyo in lala yiraahdo ‘TAHLIIL HALLOO TUFEE TOLOOW MA CABAYAAN’. Walaalayaal aan is ceebsano..!!
Ra’iisul wasaaraha Turkey Raceb Dayib Erdogan oo ka hadlayay hadallo ay dadka qaar isla dhex marayeen ayaa laga qoray ‘’Anagu Soomaaliya dan gaar ah oo istaraatijiyadeed kama lihin iyo dhibaato amaanna kuma qabno, laakiin waxaan u gurmanaynaa walaal soo jireena iyo meel damiirka insaaniyadda lagu tijaabin doono’’ isagoo tixraacayay abaartii baal mareeba ee sanadkii hore.
Dowladda Turkiga oo Soomaalida usoo birmatey waqtigii ugu xumaa ee ay kala baran lahayd nacabkeed iyo nasteexeeda ayaa saameeyn balaaran oo ijaabi ah ilaa iyo haatan ku yeelatay hor u socodka nabada Soomaaliya iyadoo ay jiraan sababo badan oo loogu mahad celiyo Turkiga oo aan abaalkooda la gudi karin waxa uu qabtayna aan qoraal lagu koobi karin.
Marka 1-aad wajihitaanka Turkiga ee ku aadan sida uu u fahmey halka ay sartu ka qurunsan tahay oo aan siyaasad kaliya ahayn ayaa ah arin cajiib ah iyadoo uu Turkigu adeegsadey istaraatijiyad ah ‘’Masaamiirta oo dhami dhib maaha, burisyada oo dhamina xal maaha’’.
Marka 2-aad Turkigu xaajada kama eegin tirada inta milyan ee lasoo dhiibo ee wuxuu ka eegay sida ugu haboon ee lacagahaasi loogu maal gelin mashaariicda loo baahan yahay ee dhiig joojinta ah sida soo nooleynta kaabayaashii dhaqaalaha IWM iyagoo dhanka kale Nairoobinimadii lacagta badan lagu cuni jirey ka saaray siyaasadda Soomaaliya oo ay aduunkii ku xireen.
LA SOCO QAYB KALE..